Ibhokisi yeLitha yeekati ezizenzekelayo
I-Smart Feeder kunye noMthombo waManzi
Imveliso yoMbane yoMbane
Ibhokisi yenkunkuma ezenzekelayo, itekhnoloji ephezulu yokukhulisa izilwanyana ukuze ukhulule izandla zakho!
Bayanda abantu abatsha abafuya iikati, kodwa akubonakali ngathi kulungile njengoko bebecinga, ngakumbi ngalo lonke ixesha kukho ivumba lobulongwe bekati egumbini phambi kokuba libe nexesha lokuhlatshwa ilindle, hlala uvumela Abantu bathande. bazithiye izilwanyana zabo zasekhaya. Ibhokisi yenkunkuma ezenzekela ngokugqibeleleyo kaPetlar iyinyani...
Imveliso entsha ehlakaniphile ekhulula intsapho yekati - Ibhokisi ye-litter ezenzekelayo, eyenza iikati zaneliseke kakhulu
Uyazi, owona msebenzi ungundoqo webhokisi yenkunkuma kukucombulula ingxaki ye-shoveling shit. Loluphi uphononongo lwevidiyo, ukujongwa kwedatha yezempilo (ubunzima, inani lokutyelelwa kwendlu yangasese), ukusebenza okude, ukuqatshelwa kweekati ezininzi, ilizwi elikrelekrele, ukulibaziseka kwexesha, njl.
Yintoni omawuyenze xa ukuziphatha kwekati yakho kungalindelekanga
ngu admin nge 21-07-06
Iikati zihlala zixhathisa utshintsho. Ngamanye amaxesha, ukuba inkonkxa yenkunkuma isusiwe okanye uhlobo lwenkunkuma luyatshintsha, baya kuyeka ukusebenzisa umgqomo wenkunkuma. Akuqhelekanga ukuba iikati ziyeke ukusebenzisa ibhokisi yazo yenkunkuma ngaxa lithile ebomini bazo. Kubalulekile ukufumanisa unobangela phambi kokuba kube yimeko eyingozi...
Izibonelelo zerabha yendalo
ngu admin nge 21-07-02
Kwihlabathi lobugcisa obuphezulu kushishino lwanamhlanje, ingcinga yokusebenzisa imveliso eyayivele emthini ibonakala iyinto eqhelekileyo ukutsho. Nangona kunjalo, ukuba ucinga malunga nokuba zingaphi na iimveliso ezisebenzisa irabha yendalo evulziweyo ephuma kumthi werabha wePará uya kusiqonda isizathu sokuba ...
Kutheni iithoyi zeenja zibaluleke kangaka
ngu admin ngo 21-07-01
Zisenokubonakala zilula kakhulu, kodwa iithoyi zenja ziyinkalo ebalulekileyo yayo nayiphi na impilo yenja, irejimeni yokuzilolonga kunye nobomi. Silapha ukuze sikuxelele ngakumbi… Ukuba injana yakho inento efana nezinja zethu, mhlawumbi ingena kwisiphithiphithi sochulumanco ngokukhankanya nje iithoyi zezinja. Ukushukuma imisila, amehlo avulekileyo kwaye uhamba nje...
Iingozi Zokondla Ngokugqithisileyo Izilwanyana Zakho Zasekhaya
ngu admin on 21-06-29
Isilwanyana sasekhaya iqabane elikhulu Ukugcina isilwanyana sasekhaya yinto entle kakhulu. Izilwanyana zasekhaya zibonelela ngokonwabisa kunye nenkxaso yeemvakalelo ebantwini kwaye ngokukhawuleza iba yinxalenye yosapho. Abantu badla ngokuthanda ukugcina izinja, iikati, neentlanzi njengezilwanyana zasekhaya. Umnqweno wokugcina isilwanyana sasekhaya ngumsebenzi onzima njengoko kufuneka umntu akhathalele ...
Iingenelo zeSondli sezilwanyana ezizenzekelayo
Ngenxa yezinto ezintsha ezahlukahlukeneyo zobugcisa, kuye kwakho izixhobo nezixhobo ezininzi ezitsha eziyilelwe ukusetyenziswa ngumntu. Zininzi iinkqubo ezizenzekelayo ezisetyenziswayo kubomi bethu bemihla ngemihla kwaye ezi sizisebenzisa kwiinzuzo zethu. Namhlanje, isixhobo esitsha siphumile kwintengiso kwaye olu luqalo olunokuthi a...
Indlela yokukhetha kunye nokusebenzisa indlu yangasese yeekati ezizenzekelayo
ngu admin nge 21-06-01
Zeziphi ezona bhokisi zilungileyo zokuzicoca? Ukufumana eyona bhokisi yenkunkuma yekati ezenzekelayo kwikati yakho kufuna ukufumana ibhalansi phakathi kweempawu ozifunayo kunye nento ikati yakho ekhululekile ngayo. Ezinye iikati zinokuthintelwa okanye zonakaliswe zingxolo ezikhulu, ke ibhokisi yenkunkuma eyenzelwe ukusebenza ...
Ngaba iBhokisi yokuZicoca yeLitha iNcinci ngenene?
ngu admin on 21-05-18
Lelona candelo lincinci lithandwayo lokukhulisa ikati: ukucoca ibhokisi yenkunkuma yekati. Kuze kube oko kwenzeka, ukuvela kweebhokisi zokuzicoca zokuzicoca kwiikati kudala ukhetho lokuba ibhokisi yenkunkuma ngokwayo icoceke emva kwekati yakho. Kodwa ngaba ezi bhokisi zenkunkuma zokuzicoca kwiikati ngokwenene zisebenza ngaphantsi? W...
UmGaqo wokuSebenza weBhokisi yeLitha yekati eSmart
Iibhokisi zokuzicoca zokulahla inkunkuma zisebenzisa itekhnoloji eyenza inkqubo yokulahla inkunkuma. Ezinye iimodeli zineendlela zokudibanisa zombane ezikhupha ngokuzenzekelayo i-clumps ngaphandle kwebhokisi ye-litter kwi-container evaliweyo, elahlayo-efakwe kwingxowa emva kokuba isilwanyana siyisebenzisile. Ezi modeli zisebenzisa i-pres...
Idilesi: 1388 Tianfu Avenue, Chengdu, Sichuan, China